Dienolone အမှုန့် (6218-29-7) hplc≥98% Buy | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / ဟို steroids / Trenbolone အမှုန့်စီးရီး / Dienolone အမှုန့် (6218-29-7)
SKU: 6218-29-7. Categories: Trenbolone အမှုန့်စီးရီး, ဟို steroids
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Dienolone မှုန့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (6218-29-7) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Dienolone အမှုန့် (Dienolone (Trenazone Tren X ကို)) စျေးကွက်ဘယ်တော့မှသော 19-nortestosterone အုပ်စုတစ်စု၏တစ်ဒြပ်ဟို-အန်ဒရိုဂျင် Steroid တစ်မျိုး (AAS) ဖြစ်ပါသည်။ Dienolone မျှမျှတတဟိုသော်လည်းမအလွန်အန်ဒရိုဂျင်ဖြစ်ဖို့ကဖေါ်ပြခြင်း, methyl-testosterone ဟော်မုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် 100 / 10 ၏အန်ဒရိုဂျင်အချိုးတစ်ခုဟိုရှိပါတယ် ...
Dienolone အမှုန့် အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: Dienolone အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 189-192 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
အရောင်: အဝါရောင် Crystalline အမှုန့်ကိုချွတ်
ဓာတုအမည်များ: Dienolone အမှုန့်, "tren" အဖြစ်ရည်ညွှန်း။
အခြားအမည်များ: မဟုတ်သလို Dienolone အမှုန့်, ru-3118, Trenazone, Dienazone, Trenazone Tren X ကို
Dienolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့် (Dienolone အမှုန့် (Trenazone Tren X ကို)) စျေးကွက်ဘယ်တော့မှသော 19-nortestosterone အုပ်စုတစ်စု၏တစ်ဒြပ်ဟို-အန်ဒရိုဂျင် Steroid တစ်မျိုး (AAS) ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာ trenbolone Dienolone အမှုန့်အဖြစ် AR များအတွက်တူညီဆှဖှေဲ့အပိုင်ရှာတွေ့ခဲ့သည်သော်လည်းအနည်းငယ်နိမ့်သည့်အန်ဒရိုဂျင် receptor (AR) အတွက်ဆှဖှေဲ့နှင့်အဓိကချို့ယွင်းအဲဒီ receptor (PR စနစ်) ကြွက်နှင့်ယုန်တစ်ရှူး bioassays အတွက် nandrolone မှဆွေမျိုးအပိုင်ကိုတွေ့ပေမယ့် several- ထားပြီး ၎င်းတွင် PR များအတွက်တိုးမြှင့ဆှဖှေဲ့ခေါက်။ methylDienolone အမှုန့်နှင့် ethylDienolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်နှုတ် Dienolone ၏တက်ကြွ17α-alkylated AAS အနကျအဓိပ်ပါယျနေစဉ် Dienedione (စ 19-မဟုတ်သလို-4,9-androstadienedione အဖြစ်လူသိများ Dienolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်များ၏ 17-keto analogue,), Dienolone အမှုန့်တစ် prohormone ဖြစ်ထင်နေသည် အမှုန့်။ ဆနျ့ကငျြ, dienogest, Dienolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်များ၏17α-cyanomethyl ဆင်းသက်လာတဲ့အစွမ်းထက် progestogen နှင့် antiandrogen ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှန်ရလဒ်များအတွက်သောက်သုံးသောအပေါ်မှာအခြေခံကွဲပြားပါလိမ့်မယ်, သို့သော်အများဆုံးဆေးညွှန်းမှာ Trenazone အနည်းငယ်, bodyfat လျော့ကျလာနှင့်အတူကူညီကြွက်သားခိုင်မာသောတိုးမြှင့်, ကြွက်သားအရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်, ပြန်လည်နာလန်ထူမြှင့်တင်ရန်နှင့်ထို့ထက် ပို. အထူးကြပ်မတ်လေ့ကျင့်ခန်းမြှင့်တင်ရန်ပါလိမ့်မယ်။
Trenazone မကြာခဏကအခြားတ္ထုများ၏ထိပ်ပေါ်မှာသီးနှံများကိုပုံအသုံးပြုသည်, သို့သော် Non-methylated ကြောင့်အစားအစာ, လေ့ကျင့်ရေးနှင့်ထိုးခွင့်ပြုသောအစက်အပြောက် on.StackingTrenazone တစ်ဦးလူကြိုက်များပုံးဖြစ်ပါတယ်များမှာလျှင်မြင်နိုင်ရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ရလဒ်များကိုတွက်ချက်ရန်၎င်း၏အလွန်ခက်ခဲ ထိုကဲ့သို့သော Epistane အဖြစ်ရေပန်းစား methyl ဟိုအတူကပေါင်းစပ်ဖို့အသုံးပြုသူများသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးမျှတသောဟို / အန်ဒရိုဂျင်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပိုမိုမြင့်မားအန်ဒရိုဂျင်တ္ထုများနှင့်အတူဤဒြပ်ပေါင်းများသီးနှံများချင်လိမ့်မယ်။ Trenazone တစ်အမြောက်အများသို့မဟုတ်တစ်ဖြတ်ဖြစ်စေစဉ်အတွင်းအသုံးပြုသွားမည်နိုင်ပါသည်။ အောက်တွင် Trenazone လေ့နှင့်အတူ stacked ဖြစ်ပါတယ်အများအပြားဟို၏တိုတောင်းတဲ့စာရင်းဖြစ်ပါသည်:
methyl ဒြပ်ပေါင်းများမှာ (စသည်တို့ကို Epistane, methyl-Stenbolone, D-Plex,)
non-methyl ဒြပ်ပေါင်းများမှာ (Stanodrole, 1-DHEA, 11-oxo, etc)
DosingThis ဒြပ်ပေါင်းများကိုမကြာခဏပြုလုပ်အနည်းငယ်မျှသာအသည်း strain ဖြည့်စွက်မှုကြောင့် methyl ထုတ်ကုန်နှင့်အတူ stacked ဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် Trenazone 1-1.5ml နှင့်အတူတစ်နေ့လျှင် (75-112.5mg) ကလူကြိုက်အများဆုံးသောက်သုံးသောဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အတိတ်လိုလားသူဟော်မုန်းသို့မဟုတ်ဒီဇိုင်နာ Steroid တစ်မျိုးအတွေ့အကြုံနှင့်အတူအသုံးပြုသူများကိုကြုံတွေ့ 2ml (150mg) ၏အထက်သို့အတွက်ဆေးညွှန်းစမ်းသပ်နိုင်ပါသည် day.Since နှုန်းကဒီဒြပ်ပေါင်းများမဟုတ်ပါဘူး အဖြစ်ခက်ခဲသင့်ခန္ဓာကိုယ်သံသရာအပေါ် 8 ရက်သတ္တပတ်အသုံးအများဆုံးဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူအရှည်6ရက်သတ္တပတ်အထိတိုးချဲ့နိုင်ပါသည်။ အများစုမှာအသုံးပြုသူများသည်ကြွက်သားခိုင်မာသော / တိုးချဲ့အစွမ်းသတ္တိ၏ပုံစံအတွက်တတိယရက်သတ္တပတ်အားဖြင့်သက်ရောက်မှုကိုသတိပြုမိရန်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ ပိုပြီးအတွေ့အကြုံရှိအသုံးပြုသူများသည်လုံခြုံစိတ်ချစွာ6weeks.Transdermal ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန် run နိုင်ပါတယ်ပေမယ့်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအသုံးပြုသူများသည်အစဉ်အမြဲ, သံသရာအရှည် 8 ရက်သတ္တပတ်ကျော်လွန်အထွေထွေထိုးပမာဏအတွင်းနေထိုင်ရန်နှင့်မပြုလုပ်သင့်ဒီတော့ Trenazone ၏တစ်ချိန်ကနေ့စဉ်လျှောက်လွှာစံပြပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးအလွန်ရှည်လျားဝက်ဘဝကိုရှိသည်။ Trenazone လျှောက်ထားရန်အကောင်းဆုံးနေရာကတော့လည်ပင်း, အထူးသဖြင့်အဆိုပါ clavicle အထက်အနိမ့်လည်ပင်းအထက်ပိုင်းကျောပြင်ပေါင်, ရင်ဘတ်နှင့်ဝမ်းဗိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လို Dienolone အမှုန့်အကျင့်ကိုကျင့်
Dienolone အမှုန့် (4,9-estraDienolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်) ကိုလူကြိုက်များ "tren ရှေ့" အမှန်တကယ်ကူးပြောင်းအရာဖြစ်တယ်။ ဒီ Steroid တစ်မျိုး (methylDienolone အမှုန့်) ၏ methyl ဗားရှင်းကောင်တာကျော်ရရှိနိုင်ခဲ့စောစော 2005 အတွက်များစွာသောအခြား steroids နှင့် prohormones နှင့်အတူပိတ်ပင်ခဲ့မခံရမီပါးစပ် trenbolone အဖြစ်စျေးကွက်။ Dienolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်နှင့် trenbolone ဖွဲ့စည်းပုံအတွက်အလွန်ဆင်တူဖြစ်ကြ၏, ဒါပေမဲ့သူတို့အတူတူပင်ဖြစ်စဉ်းစားမရသင့်ပါတယ်။
Dienolone အမှုန့်အလွန်အန်ဒရိုဂျင်မျှမျှတတဟိုသော်လည်းမဖြစ်ဖို့ကဖေါ်ပြခြင်း, methyl-testosterone ဟော်မုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် 100 / 10 ၏အန်ဒရိုဂျင်အချိုးတစ်ခုဟိုရှိပါတယ်။ Dienolone အမှုန့်အီစထိုဂျင်မှပြောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်အီစရိုဂျင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများတိုးမြှင့်နိုင်သည့်အချို့သော progestational လှုပ်ရှားမှုရှိပါဘူး။ ဤအကြောင်းကြောင့်, Dienolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ပုံမှန်အားဖြင့်အီစထိုဂျင်ပြောင်းလဲခြင်း၏မြင့်မားမှုနှုန်းရှိသည်သောအခြားအစတီရွိုက်သို့မဟုတ် prohormones နှင့်အတူ stacked မပေးပါ။ trenbolone ကဲ့သို့ပင် Dienolone အမှုန့်ခန္ဓာကိုယ်အပူဆုံးရှုံးမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အဆီဆုံးရှုံးဖို့အသုံးပြုသူကူညီပေးနေ, thermogenic အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်မျိုးရှိနိုင်ပါသည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုများတွင် Dienolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ဟာအီစထိုဂျင်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲ trenbolone ဖို့ဒါမှမဟုတ် nandrolone မှနှိုင်းယှဉ်ဖြစ်သင့်သည်။
Dienolone အမှုန့်အန်ဒရိုဂျင်သို့မဟုတ်အီစထိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး၏စည်းကမ်းချက်များ၌သိပ်ကြမ်းတမ်းမဖြစ်သင့်ပေမယ့်မဆို Steroid တစ်မျိုးအန်ဒရိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနှင့် Dienolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်များ၏ progestational သက်ရောက်မှု gynecomastia ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုလုပ်အတူ။ Dienolone အမှုန့်ကိုယူသည့်အခါနှုတ်ကအသည်းအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏ကြီးမားသောငွေပမာဏကိုမထားသင့်ပါတယ်ဒါမှ methylated မပေးပါ။
ကံမကောင်းစွာပဲ, တစ်ဦးကဆက်ပြောသည်ကို C-17 မီသိုင်းအုပ်စုတစ်စု၏မရှိခြင်းအလွန်ဆင်းရဲပါးစပ် bioavailability ရှိသည်ဖို့ Dienolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်, ဒါကြောင့်ဒီဖြစ်ကောင်းဒီ Steroid တစ်မျိုးယူဖို့ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီအစား, တဦးတည်းကုန်ကြမ်းအမှုန့် Dienolone ဖို့ပါးစပ်ရှေ့ပြေးယူချင်လိမ့်မယ်။ Dienolone အမှုန့် succussfully (အရေပြားမှတဆင့်စုပ်ယူ) တစ်ဦး transdermal အဖြစ်အသုံးပြုစေခြင်းငှါ, ဤ Steroid တစ်မျိုးတစ်ဦးထိုးဆေးပုံစံလည်းထိရောက်သောဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Endearingly ဟာသနှင့်အွန်လိုင်းအသိအမှတ်ပြုထားသည့်၏မျက်နှာကို ထောက်. "အစားအသောက်ဒေါက်တာ Tren" စတင်သုံးစွဲ, Dienolone အမှုန့်ဟို-အန်ဒရိုဂျင် steroids (AAS) ၏ Nandrolone လူတန်းစားကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဟူသောဝေါဟာရကိုအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သည့်အတိုင်း Dienolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့် (က / A 100: 10) Trenbolone (က / A 500: 500) ၏ဆင်တူဝိသေသလက္ခဏာများပြသ; အဆိုပါဖိုရမ်အကြိုက်ဆုံးထက်ပိုမိုပျော့အတိုင်းအတာအထိဆိုသော်ငြား။ စာရွက်ပေါ်တွင်အာနိသင်တစ်လှည့်ဖြားခြားနားချက်နေသော်လည်းခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိတိုးတက်မှု Dienolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်အားလုံးပါဝင်နိုင် protocol များ၏ပုံမှန်ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးကို standalone အဖြစ်, Dienolone အမှုန့်ထိုကဲ့သို့သော testosterone, Oxymetholone နှင့် Methandrostenolone အဖြစ်ဒြပ်ပေါင်းများ၏ hypertrophy စွမ်းရည်ကင်းမဲ့။ သို့သော်တစ်ဦးအန်ဒရိုဂျင်နှင့်အတူ၎င်း၏တစ်ပြိုင်တည်းအသုံးပြုမှုကိုအလွန်ပိန်ကြုံသောဒြပ်ထုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး potentiates ။ ကြောင်းကိစ်စတှငျ Dienolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ရဲ့အရွယ်အစား-oriented ဒြပ်ပေါင်းများမှတန်ဖိုးရှိသောထောက်ပံ့အခန်းကဏ္ဍပြည့်ပေမယ့်မဆိုအတိုင်းအတာအားဖြင့်တစ်ဦးအလယ်တန်း Steroid တစ်မျိုးစဉ်းစားမရသင့်ပါတယ်။ Dienolone မှုန့်စစ်မှန်တဲ့တန်ဖိုးကိုထို့အပြင်ဆန့်ကျင်အဖြစ်က၎င်း၏ထို့အပြင်အကွိမျမြားစှာဖြစ်ပါတယ်။
အိပ်မပျော်, ယားယံခြင်း, ကျူးကျော်ညဉ့်အခါချွေးတ "tren ချောင်းဆိုး," စတာတွေထိုကဲ့သို့သောလက်တွေ့ဂုဏ်သတ္တိများမှသံသယရှိနေကြသည်: အစီရင်ခံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများချို့တဲ့ - Dienolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်နှင့် Trenbolone အကြားရေးဆွဲတူညီနေသော်လည်းသို့ရာတွင်တုံ့ပြန်ချက်ယခင် ပို. ခံသာနှိုင်းယှဉ်လျှင်ခံညွှန်ပြ Dienolone အမှုန့်ရဲ့ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ပျက်ကွက်ဖြစ်သော Trenbolone ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ၏ 11-ene အစိတ်အပိုင်းကကမကထပြုခဲ့ရလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်ထင်ရှားတဲ့နှစ်ခုကြီးမြတ်သောဟိုရိုမျက်နှာသာ Dienolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်နှင့်အတူဟို-အန်ဒရိုဂျင်အချိုးတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ကွာဟမှုဖော်ပြရန်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဤသည်ခြားနားချက်ဖွယ်ရှိဖျောပွဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖို့တိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးဖြစ်ပါတယ်။ အပျော့စားပါကသည်မဟုတ်, ယင်း၏ဓာတုဝမ်းကွဲတစ်လျော့နည်း-ကြမ်းတမ်းအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်, Dienolone အမှုန့်ဟာအီမပါဘဲနှိုင်းယှဉ်စွမ်းဆောင်မှုနှင့်ဗေဒအကြိုးကြေးဇူးမြားပေးထားပါတယ်။
Dienolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်, တက်ကြွစွာ methyl နှင့်ရှေ့ပြေးမျိုးကွဲများ၏ပုံစံအတွက်ဖြည့်စွက်စျေးကွက်ပေါ်မှာပေါ်လာ၏စဉ်ဆက်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ over-the-counter "ကြွက်သားဆောက် '' အဖြစ်၎င်း၏အောင်မြင်မှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း Trenbolone Analogues အဖြစ်အတုခံအမှုန့်အနကျအဓိပ်ပါယျ Dienolone မှစွပ်စွဲနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ Steroid တစ်မျိုးရဲ့ပင်ကိုထိရောက်မှုနှင့်အတူ coupled ဤသည်စျေးကွက် misnomer Dienolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်နှင့်၎င်း၏လိုလားသူဟော်မုန်း counterparts တွေကို၏အောင်မြင်မှုကိုရရှိနိုင်မည်။ အဆိုပါအနကျအဓိပ်ပါယျအကြီးအကျယ်ထိန်းချုပ်ထားသောတ္ထုများအဖြစ်စျေးကွက်အတွင်းမှဖယ်ရှားခဲ့သည်တိုင်အောင် Dienolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုယ်နှိုက်က သာ. ကြီးမြတ်အသုံးချမြင်ဘူးသော, သို့သော်, မဟုတ်ခဲ့, "Pro ကို-Tren" ဖြည့်စွက်ပါးစပ်ပလီကေးရှင်းအလားအလာဖြစ်ခြင်း၏ရလဒ်အဖြစ်ကနဦး preference ကိုကျင်းပခဲ့တယ်။ သေအချာသည်ပြုပြင်မထားတဲ့ Dienolone အမှုန့်ဖွဲ့စည်းမှုဟာအပေါ်မဆိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာစာရင်းထဲကနေပျက်ကွက်ကျန်ရစ် 'ပိတ်ပင်ထားစာရင်းဖြစ်သည်။ "ဒီစွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်အပေါ်စိတ်အားထက်သန်သောသူတို့အားရန်၎င်း၏ရရှိနိုင်မှုထိန်းသိမ်းတစ်မူထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုပေးအပ်သည်။
မဆိုမီသိုင်းပူးတွဲမှုသို့မဟုတ်ပြုပြင်မွမ်းမံချို့တဲ့ဘဲစေ့စပ် Dienolone အမှုန့်ရဲ့အခြေစိုက်စခန်းတည်ဆောက်ပုံသိသိသာသာညံ့ဖျင်းခြင်းမရှိဘဲခံတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးကိုခံယူနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အစဉ်အဆက်လုံ့လဝိရိယ, အဖြည့်စွက်စျေးကွက် Hepatic ပျက်ပြားကျော်လွှားတဲ့နည်းလမ်းအဖြစ် transdermal သယ်ဆောင်အသုံးချဖို့ထုတ်ကုန်တစ်ခုဝင်လာမွေးထုတ်။ ဤအ transdermal ပေးပို့စနစ်များ၏ထိရောက်မှုကိုနေသော်လည်း DASCA များ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလိုလားသူဟော်မုန်းအမျိုးအစားစွန့်ခွာရန်ကုမ္ပဏီအများအပြားအားပေးခဲ့တယ်။ ဖြည့်စွက် purveyors များ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကြောင့်စိတ်ပျက်ယခုရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးသုတေသနဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း၎င်းတို့၏အမျိုးမျိုးသောဒီဇိုင်နာထုတ်ကုန်များအတွက်ရေနံအခြေပြု application ဦးစားပေးစတင်လိုက်ပါပြီ။ တင်းကြပ်စွာသာသုတေသနအသုံးပြုရန်ဖြစ်သော်လည်းဤအစွမ်းထက်ဖြေရှင်းချက်မိမိတို့၏ချွတ်-တံဆိပ်တစ်ခုလက်လှမ်းနည်းလမ်းရှာဖှသေူမြားအတှကျ godsend ဖြစ်လာကြပါပြီ "လေ့လာမှုများ။ "
Trenazone နှင့်အတူဘေးထွက်သက်ရောက်မှုတစ်ဦးတည်းရပ်တည်အသုံးပြုသောအခါ, ဒါပေမဲ့ဒါဟာသွေးဖိအားခြီးမွှောနှင့် lipid အဆင့်ဆင့်မဆိုဟိုကဲ့သို့တူညီသောပွောငျးလဲနိုငျအဖြစ်ဘုံမရှိကြပေ။ ကြောင့်ကြောင့်သူတို့ကအဓိကချို့ယွင်းအဲဒီ receptor gyno တစ်ခုဆှဖှေဲ့သို့သော် epistane သို့မဟုတ် stanodrol ကဲ့သို့သောပိုမိုမြင့်မားအန်ဒရိုဂျင်ဥစ္စာနှင့်အတူဤ stacking this.With ဆိုဒီဇိုင်နာ Steroid တစ်မျိုးသို့မဟုတ်လိုလားသူဟော်မုန်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုလျှော့ချကူညီပေးပါမည်, ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ရှိခြင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးအများဆုံးကိစ္စများတွင်မှ 'သငျ့လျြောသော On-သံသရာထောက်ခံမှုလမ်းညွှန်ချက်များသည်အောက်ပါတို့ကရှောင်နိုင်သည်ပြန်လည်။ အောက်ပါ Trenazone နှင့်အတူတခြားဖြစ်နိုင်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုစာရင်းဖြစ်ပါသည်:
လိင်စိတ် / လိင်ရာထူးအမည်လျော့နည်းသွား
စိုးရိမ်စိတ် / stimulation Feeling
နောက်ကျော (လေ့ကျင့်ခန်းစဉ်အတွင်း / ပြီးနောက်နောက်ကျောများတွင်မှိုင်းနာကျင်မှု) ညှစ်ထုတ်လိုက်
AASraw ထံမှ Dienolone အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
Nandrolone laurate အမှုန့်
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော 2.005ထဲက